ASOSIMOX Olympic Aerospatiale FSX & P3D
FSXA / P3D Aerospatiale AS350 fampiroboroboana Olaimpika miaraka amin'ny PDF & AP.
Grady fonosana ny Olaimpika Aviations Aerospatiale AS350 Hellicopter SX-HFA roa Liveries. Ny karazana 350 / B / BA sy 355F fanompoana tao amin'ny orinasa avy any 1982 ho 1994. Ny zava-drehetra dia vaovao. Avy amin'ny Virtual Cockpit ny vaovao Flight Kilonga Display / GPS / Radios sy Simcontrol sy iray miasa tanteraka miaraka amin Tsy Mifantoka amin'ny Control. New Camera Views sy ny 2D tontonana koa nohavaozina. Efa fomba amam-panao ny modely feo animation faritra rehetra sy manokatra 4 fivoahana rehetra sy ny tsara atao nafana pilot.All ny endri-javatra ny payware maimaim-poana. Ny ivelany dia izao tena-tsipiriany amin'ny avo gloss 2048px textures.
Historical sary ny Olaimpika andian-tsambo dia hita ao amin'ny fonosana.
Ity modely tsara ity dia natao tamin'i Tamas & Peter Nemeth. Notsaraina FSX Haingana. Fivarotana sy fanamafisana ny Hetsic Aircraft / Yiannis Katehis Tsetsas.